BitQuark စျေး - အွန်လိုင်း BTQ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitQuark (BTQ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitQuark (BTQ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitQuark ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $6 596.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitQuark တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitQuark များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitQuarkBTQ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00176BitQuarkBTQ သို့ ယူရိုEUR€0.00149BitQuarkBTQ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00134BitQuarkBTQ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0016BitQuarkBTQ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0158BitQuarkBTQ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0111BitQuarkBTQ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.039BitQuarkBTQ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00655BitQuarkBTQ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00234BitQuarkBTQ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00244BitQuarkBTQ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0394BitQuarkBTQ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0136BitQuarkBTQ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00943BitQuarkBTQ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.132BitQuarkBTQ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.297BitQuarkBTQ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00241BitQuarkBTQ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00264BitQuarkBTQ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0548BitQuarkBTQ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0122BitQuarkBTQ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.186BitQuarkBTQ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2.09BitQuarkBTQ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.67BitQuarkBTQ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.129BitQuarkBTQ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0488
BitQuarkBTQ သို့ BitcoinBTC0.0000001 BitQuarkBTQ သို့ EthereumETH0.000004 BitQuarkBTQ သို့ LitecoinLTC0.00003 BitQuarkBTQ သို့ DigitalCashDASH0.00002 BitQuarkBTQ သို့ MoneroXMR0.00002 BitQuarkBTQ သို့ NxtNXT0.126 BitQuarkBTQ သို့ Ethereum ClassicETC0.000244 BitQuarkBTQ သို့ DogecoinDOGE0.512 BitQuarkBTQ သို့ ZCashZEC0.00002 BitQuarkBTQ သို့ BitsharesBTS0.0669 BitQuarkBTQ သို့ DigiByteDGB0.0648 BitQuarkBTQ သို့ RippleXRP0.00569 BitQuarkBTQ သို့ BitcoinDarkBTCD0.00006 BitQuarkBTQ သို့ PeerCoinPPC0.00623 BitQuarkBTQ သို့ CraigsCoinCRAIG0.782 BitQuarkBTQ သို့ BitstakeXBS0.0732 BitQuarkBTQ သို့ PayCoinXPY0.0299 BitQuarkBTQ သို့ ProsperCoinPRC0.215 BitQuarkBTQ သို့ YbCoinYBC0.0000009 BitQuarkBTQ သို့ DarkKushDANK0.55 BitQuarkBTQ သို့ GiveCoinGIVE3.71 BitQuarkBTQ သို့ KoboCoinKOBO0.382 BitQuarkBTQ သို့ DarkTokenDT0.00162 BitQuarkBTQ သို့ CETUS CoinCETI4.95
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 16:05:02 +0000.